Iyini i-irradiator ye-ultraviolet futhi yenzani? Ngokubambisana nelanga nemisebe yayo ye- ultraviolet, ungakwazi ukuphendula ngokushesha - ukushisa ilanga. Futhi lokhu kuyiqiniso, kodwa hhayi kuphela ...
Imisebe ye-ultraviolet yokushisa ilanga
Odokotela baye baphenya ngemiphumela yokukhanya kwelanga emzimbeni womuntu amashumi eminyaka futhi sebefikile ekuphetheni ukuthi ngokulinganisa okulinganiselwe kuyasiza. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ngaphansi kwethonya lokukhanya kwelanga, isisetshenziswa somzimba sisasebenza, umsebenzi we-circulatory system kanye nama-gland of secretion yangaphakathi, isizinda esikhulu se-hormone jikelele, ukuzivikelwa komzimba kuqiniswa.
Futhi yini okufanele uyenze ngenkathi ilanga lingasebenzi? Odokotela banikezwa izinsana kusukela ngoSepthemba kuya ku-Ephreli kanye ne-ultraviolet irradiation yesibani se-quartz.
Ngakho-ke, i-irradiator ye-ultraviolet "Solnyshko" yamandla amancane ngesibani se- mercury-quartz singakwazi ukubuyisela imisebe yelanga nge-autumn slushy nobusika obubandayo, ikakhulukazi ezindaweni ezisenyakatho. Abantu abadala, kanye nezingane, nabo, bangathola i-tan enhle futhi bakwazi ukungena ekukhanyeni kwe-ultraviolet ngaphansi kwethonya lesibani se-quartz "Sun". Lesi sibani asihloselwe ukubhujiswa kwamabhaktheriya namagciwane, isetshenziselwa kuphela njenge-mini-solarium.
Irradiation yendawo ngaphansi kwesibani se-quartz "Solnyshko"
Amamodeli we-ultraviolet irradiators anesibani esinamandla, esinezenzo ze-virucidal ne-bactericidal, sisiza umzimba ukuthi ubhekane nokutheleleka.
Ngesizo sosizo lwekhaya elinjalo, ukuvuvukala emasopharynx nasemlonyeni kuyaphathwa ngokwezinhloso ze-ENT odokotela namazinyo; Izidakamizwa - izilonda ezinegciwane kanye nokuvuvukala; I-neuropathologists kanye ne-therapists - i-arthritis nezimpawu ezihlukahlukene zobuhlungu; Dermatologists - izifo zesikhumba. Nika ukwelashwa ngama- radiation odokotela bama-ray kanye nabantwana bamazinyo.
Ukuchayeka kwendawo, kokubili i- ultraviolet irradiator OUFB-04 "Sun" kanye ne-OUFk-01 yangaphambili isetshenzisiwe.
Ekhaya, lawa ma-irradiators asetshenziselwa ukungasebenzi ngegumbi lapho isiguli sikhona khona. Le nqubo kufanele yenziwe ngokungabikho kwabantu ekamelweni.
Ukuqeda ukushisa umoya wangaphakathi
Sekuyisikhathi eside kunama-irradiator ye-bactericidal ohlobo oluvulekile, izibani eziphuma ku-ultraviolet enzima kakhulu, eziyingozi kubantu. Amadivaysi anjalo afakwe i-timer ekhethekile evala idivayisi ngesikhathi esinikeziwe, evumela abantu ukuba bashiye izakhiwo ngesikhathi sokushiswa kwe-disinfection.
Isibonelo sedivayisi enjalo i-irradiator ye-bactericidal ultraviolet ene-timer UVBOT-40-01 "Ufobakt." Angasetshenziselwa kuphela emakamelo amakhulu namancane, kodwa futhi nasezokuthutha: umgwaqo, isitimela, imikhumbi ehamba olwandle kanye nezindiza.
Ukukhipha amagciwane ngekhilimu kukhona ama-irradiator e-ultraviolet akhethekile anezibani eziphuma emisebeni ye-ultraviolet, kodwa ukuklanywa kwedivayisi kuvumela abantu ukuba babe egumbini phakathi nomsebenzi wabo.
I-fan ekhethekile idonsa umoya ngaphakathi kwedivayisi, lapho isibani sifihliwe khona, futhi ngaphandle kuphuma kuvele kuhlaselwe. Idivaysi enjalo ingasebenza usuku lonke ekamelweni lapho abantu bekhona, ngaphandle kokulimaza kubo. Ngakho-ke, i-irradiators-recirculators i-OBR-15 ne-OBR-30 ngesikhathi sezifo zengculazi kanye nosongo lwezinto ezenzekayo ekuvimbeleni ukudluliselwa kwezifo zisebenza ngokuphumelelayo ezindaweni zokungqubuzana: emahhovisi, ezikhungo zezokwelapha, amabhange kanye nezakhiwo zokuhweba.
Izibani ze-bactericidal ne-quartz - yini umehluko?
I-irradiator ngayinye ye-ultraviolet "Solnyshko" ine-alphabetic kanye nenombolo yezinombolo, isibonelo, OUFB-01, OUFd-01 noma i-OUFk-01. Uyini umehluko? Izinhlamvu eziyinhloko "k" nethi "b" - lokhu kuyi-quartz evamile noma isibani se-bactericidal. Zombili lezi zibani zikhanyisa i-ultraviolet, kodwa kusekhona umehluko.
Izibani ze-quartz zibizwa kanjalo ngenxa yeglasi elikhethekile le-quartz, elidlulisa yonke into evezwe yi-mercury, kuhlanganise ne-ozone. Futhi i-ozone emigqumeni emikhulu iyingozi, ngoba inekhono eliphezulu lokukhipha oxidizing. Ngokusebenza okuqhubekayo kwesibani se-quartz esivamile, futhi lokhu kubonakala ngabanikazi bamadivayisi anjalo, igumbi liqala ukuhogela isivunguvungu, okungukuthi, i-ozone. Ngakho-ke, ifakwe kuleso sixhobo njenge "Sun" (i-ultraviolet irradiator), imfundo ihlanganisa izinto mayelana nokukhipha igumbi, kanye nokunciphisa isikhathi esiphezulu sokusebenza kanye nobude bekhefu ekukhuculweni kwesakhiwo, kufanele kwenziwe.
Izibani ze-Quartz sezivele zithathelwe izibani eziphephile, lapho ziqala khona ukusebenzisa ingilazi ye-uviolet, ehlunga i-ozone eyingozi yomsindo. Ukubiza igama elisha ngaphandle kokulungiselela kunzima, ngakho izibani zaqala ukubizwa ngokuthi yi-bactericidal. Emiyalweni yamadivaysi anjalo, njengomthetho, kakade akukho phuzu mayelana nokushayela okugunyazayo ekamelweni ngemuva kokungafihli komoya.
Ngokuqondene nencwadi "d", kusho ukuthi idivayisi ingumntwana. I-ultraviolet irradiator "i-Sun" i-OUFd-01 yokuklama, ukumiswa, ukusetshenziswa nokuphikisanayo akufani nenye idivayisi OUFk-01. Ihlukana nesibani esingenamandla kakhulu, futhi ngenxa yalokho, imodi yokwenza kakhudlwana kakhudlwana esikhumbeni nasezingxenyeni zamangqamuzana, nesimo esimisiwe somzimba weplastiki.
Amanani ekudalweni kwe-irradiator
Iningi lalezi zibuyekezo zinikezwa ngabazali bezingane ezincane, okuye i-ultraviolet irradiator OUFk-01 "Sun" eyanconywa udokotela wezingane.
Lokhu kuyaqondakala, ngoba iningi labo bonke abantu abadala bakhathazekile ngempilo yezingane, futhi inombolo 1 iyisibani se-quartz samandla aphansi, oklanyelwe izingane ezingaphansi kweminyaka emithathu ubudala. Ngesizo salo, ungaphinda ukhiphe amagciwane ngekamelo elingaphansi kwe-12 cu. M. Ngaphansi kwengxenye yehora. M.
Ukwenza izinqubo ngokuhambisana nezincomo zikadokotela kanye nemiyalelo edivayisini, ungenza ngisho ngaphandle kokwelashwa kwezifo ezithile zegciwane noma ukunciphisa kakhulu amathuba okuba khona. Lokhu kuzibuyekezo zithi omama abaningi ngisho nezinsana nezincane kakhulu.
Kodwa i-irradiator enombhalo wesi-2 ekuqanjweni ifaneleka kakhulu kubantu abadala, ngoba isibani kuso sinamandla kakade.
I-triple ibeka i-mini-solarium yokuthungula, engatholakala ngaphandle kokushiya ekhaya. Ukukhishwa kwesikhumba se-quartz esinjalo kukhethiwe ukuze i-tan ibe yigcwele futhi ngisho.
Idivaysi ene-figure 4 i-irradiator ye-bactericidal ehloselwe ukuphathwa ngendlela efanele emasimini angama-60 sq. M. Ukusuka kokutheleleka namagciwane. Izikhungo zezokwelapha ezikhethekile lapho zonke izinto ezizungezile ziyizinzalo, i-ultraviolet quartz irradiator "uSolnyshko" isebenzisa.
Izibuyekezo zidumisa lelo divayisi ukuze liphumelele, noma kunjalo, futhi lisetshenziswe abaningi ekhaya kuphela ukuvuselela izakhiwo, naphezu kokusebenza, kanye namadivayisi angenamandla. "Sunny" No. 4 ayinqatshelwe izingane ezingaphansi kweminyaka emithathu ubudala.
Ngayo yonke imfanelo engafaneleki ye-ultraviolet irradiator "Sun" ayikwazi ukusetshenziswa yiwona wonke. Impendulo yabanikazi bamadivaysi, okumele abhekane nokusabela okungalungile komzimba ukuze kukhishwe irradiation, kuqinisekiswe ukungathí sina kwezingqinamba.
Ngokwemvelo, awukwazi ukuyisebenzisa kubantu abanezizwa ezibuhlungu ekukhanyeni kwelanga, izifo ezibulalayo kunoma isiphi isigaba, ngezikhathi zokwanda kwezifo ezingapheli, ngezinkinga zemisipha, isikhathi eside ngemva kokuhlaselwa kwenhliziyo.
Kunoma yikuphi, uma i-quartz ingaqashiwe udokotela oya khona, futhi i-irradiator iyadingeka kuphela ngoba intombazane enjalo inayo, futhi iyayithanda ngempela, kungcono ukubonana nodokotela futhi uhlolwe ngaphambi kokuba wenze izinqubo, ngisho nangokulandela ngokulandela imiyalelo.
I-irradiator ye-ultraviolet "Solnyshko" yanoma imuphi umkhiqizi igcwaliswa ngamatayipi ngenqubo yezinqubo zangasese ezinamathemitha ahlukene wezitolo, kwenye yazo ingqimba yangaphandle i-oblique engeni lika-60 °. Bangaba abathathu noma abane.
Isethi ihlanganisa izibuko. Ngandlela-thile, omama abaningi bayamangala ukuthi kungani edivayisini yezingilazi ezincane kunazo zonke, kuphela ingane. Kodwa empeleni naye kumele kube khona umuntu omdala enezibuko. Futhi ngingabatholaphi lapho kunomuntu ophakelayo kuphela endlini?
Ngaphambi kokusebenzisa i-irradiator, kufanele ufunde ngokucophelela imiyalelo. Ngokusho kubasebenzisi, kucacile futhi kuchaza ngokuningiliziwe ukulandelana kwezinyathelo ezidingekayo zezifo ezihlukahlukene kanye nokuvimbela kwabo.
Kule divayisi ayikho ukuvalwa okuzenzakalelayo, inqubo kufanele ilandelwe ngesikhathi ngeziglasi ezingenakwenzeka (!) Noma ngokungeziwe uthenge ukunikezwa kwamandla ngewashi lenqubo.
Isici esibaluleke kakhulu ekusetshenzisweni kwensimbi yi-biodosimeter. Kudingeka ukunquma i-bio-dose ngalunye uhlobo lwesikhumba, ubuzwe obuhlukile kuwo wonke umuntu, ngisho nasemkhayeni owodwa.
Imfundo ichaza ngokuningiliziwe ukuthi kufanele isetshenziswe kanjani. Kodwa abantu bethu basebenzisa ukuhlola konke, ngakho bavame ukufuna ukucaciswa kwiwebhusayithi yomkhiqizi.
Izinzuzo nezimo ze-irradiators
Ekuhloleni ukufaneleka okuhlukanisa "Sun" (i-ultraviolet irradiator) ukubuyekezwa kuyavumelana ngokufanayo. Into esemqoka ukuthi idivayisi isekela ngempela ekuphulukeleni ukubandayo nokukhwehlela, i-angina kubantwana nakubantu abadala.
Ekuqinisekisweni kwabanikazi ukuthi "kunzima ukubulala zonke izilwanyana ezincane emoyeni" lapho i-irradiator isebenza, kunzima ukukholelwa, kodwa ukuhlaziywa okuqhathaniswa kwesigameko somndeni ekwindla-ebusika ngaphandle kwe-irradiator kanye nonyaka ozayo nayo, ngokuqinisekile kufanelwe ukunakekelwa.
Izithiyo emisebenzini yabasebenzisi bezinsimbi eziphezulu azizange zithole, ngaphandle kokuthi ukungabi khona kokuvala okuzenzakalelayo kanye nekhwalithi yamaphoyinti. Izikhalazo zikhathazeka ngabakhiqizi abangenangqondo. Ungacabanga ukuthi kwenzekani uma idivayisi i-OUFB-04 igcwele ebhokisini nge-OUFK-01 ebhalisiwe. Futhi lokhu kwenzeka, ukwahlulela ngezibuyekezo. Ngakho-ke, lapho uthenga i-irradiator yengane encane, kungcono ukhethe umenzi onokwethenjelwa futhi uhlole ngokucophelela imishini.
Ukungahambi kahle ukuthi abanye abanikazi bayabiza ukuphikisana nokusebenzisa, kodwa akukho okumele kwenziwe.
Zonke izibuyekezo ziyavuma ukuthi i-ultraviolet irradiator "Solnyshko" kufanele ibe yiyo yonke indlu, ikakhulukazi ezindaweni ezisenyakatho lapho kunelanga elincane, nasemindenini enezingane ezincane.
Sulfa izidakamizwa. incazelo